Mid ka mid ah Kulamadii Shalay la ciyaaray Premier League oo ay ka soo muuqatay DHACDO JACEYL oo wayn!!!! – Gool FM
Waa kee Weeraryahanka ay doonayso Kooxda PSG inay la soo wareegto haddii uu ka tago Kylian Mbappé?
Maamulka Manchester United iyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo ku kala qaybsan xalka heshiis kordhinta Paul Pogba
RASMI: Xiriirka kubadda cagta Asia oo xaqiijiyay in xulka qaranka Korea uu isaga baxay is-reeb-reebka koobka Adduunka
Lionel Messi oo u sheegay Manchester City shuruudda ka xigta inay helaan saxiixiisa
Zinedine Zidane oo u sheegay kooxdiisa go’aanka mustaqbalkiisa…(Ma baxayaa?)
Horudhac: Athletic Club vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Osasuna, Barcelona vs Celta Vigo…(Kooxaha ku loollamaya La Liga oo isku waqti ciyaaraya)
Horudhac: West Bromwich Albion vs Liverpool…(Miyey Reds gali kartaa booska afaraad ee kala sarreynta horyaalka?)
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 19-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Athletic Bilbao
Leicester City oo garaacday kooxda Chelsea kuna guuleysatay koobkeedii ugu horreeyay ee tartanka FA Cup-ka… +SAWIRRO
Juventus oo garoonkeeda Allianz guul kaga gaartay kooxda Inter Milan… +SAWIRRO
Mid ka mid ah Kulamadii Shalay la ciyaaray Premier League oo ay ka soo muuqatay DHACDO JACEYL oo wayn!!!!
Byare April 15, 2018
(England) 15 Abriil 2018. Mid ka mid ah kulamadii Premier League ee shalay la ciyaaray ayaa waxaa ka soo muuqday Dhacdo Jaceyl oo wayn.
Markii la maray qeybta hore ciyaartii u dhexeysay iyo Brighton, Gemma Keen oo ah gabadha hogaamiyaha u ah gabdhaha dhiiro galiya kooxda oo qoob ka ciyaarka u sameeya ayaa la kulantay lama filaan wayn.
Ian Talbo oo muddo la haasaawayay Keen ayaa 24,656 taageerayaal hortooda inta Jilibka dhulka Dhigtay guur u bandhigtay saaxiibtiisa iyadoo garoonka dhan looga sacbo tumay.
Keen oo taageeraha wayn u ah Crystal Palace isla markaana hogaamisa kooxda gabdhaha dhiiro galiya naadiga ayaa HAA ugu jawaabtay saaxiibkeeda markii uu guurka u soo bandhigay iyadoona loo galiyay faraantiga alkumashada.
Naadiga lagu naaneyso Eagles ayaa iyana Farxada la wadaagtay lamaanayaasha taageeraha u ah oo waxay 3-2 uga adkaatay Brighton.
Heegan oo beerka uga dhacday Betroolka
Newcastle oo Guul soo Laabasho leh ka gaartay Arsenal.....+SAWIRRO.